Alexandre Lacazette oo Guul ku Hogaamiyay Arsenal kulankii ay u Martiyeen dhigeeda Cardiff City+SAWIRRO – Gool FM
( Premier League ) 02 September 2018. Arsenal ayaa guushii ugu horreeysay ku gaartay kulamada banaanka markii ay 3-2 ku dhaafeen kooxda xagaagan ku cusub horyaalka Premier Leageu ee Cardiff City
Kulanka ayaa qeybta hore lagu kala maray barbaro 1-1 ah iyadoo labada dhinac ay soo bandhigeen cayaar aad ku qurux badan.
Kooxda Cardiff City ayaa heshay fursadii ugu horreeysay cayaarta markii taaso uu goolka banaankiisa mariyay laacibka Harry Arter waxayna aheyd kubbad uu u baastay goolhayaha Arsenal Petr Cech.
Dheesha oo socota daqiiqadii 11-aad Arsenal ayaa qabatay hogaanka waxaan gool xoogan oo madaxa u dhaliyay daafaca Shkodran Mustafi taaso aheyd kubbad laga soo laaday koornaha ama geeska laadka.
Kulanka oo socda daqiiqadii ugu dambeysay qeybta kowaad oo Cardiff ayaa la timid goolka bareejada waxaana u dhaliyay Victor Camarasa sidaa ayaana lagu aaday naasiinada cayaarta.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha dambe Gunners ayaa wax xogaa ka firfircooneed dhigeeda Cardiff iyagoo abuuray dhawr weerar oo halisa.
Balse waxaa markale hogaanka cayaarta u dhiibay laacibkooda Pierre-Emerick Aubameyang oo kubbad aad u qurux badan daba mariyay gool ilaaliyaha Cardiff City.
Si kastaba ha ahaatee kooxda martigaliyaasha ayaa goolka barbaraha la yimaadeen kulanka oo socda daqiiqadii 70-aad waana gool madaxa u dhaliyay Danny Ward kasoo ahaa kubbad madax ah oo kalka hore ku dhacday birta.
Markale naadiga Cardiff ayaa weerar Qatar ah uu ka badbaadiyay goolhaye Arsenal Cech markii uu banaanka isaga saaray darbad shuud hoose ah.
Dheesha oo socota qeybihii tobadkii daqiiqo ee ugu dambeeyay Alexandre Lacazette ayaa u dhaliyay Arsenal goolka guusha markii uu shuud xoogan ku hubsaday goolka kaddib caawin uu ka helay laacibka badalka kusoo galay ee Lucas Torreira.
Waqtigii dheeriga ee lagu daray cayaarta kooxda Cardiff ayaa qasaarisay fursad ay ku barbaren lahaayeen goolka lagu lee yahay markii mid kamida cayaartoydeeda uu dhanka dare goolka kubbad madaxa marsiiyay
Waxayna ugu dambeyna dheesha ku idlaatay 3-2 oo ay guusha ku raacday naadiga Arsenal waana guushii labaad oo xariira oo ay gaaran afarta dheel ee ugu horreeysa horyaalka iyo markii ugu horreysay oo ay kulamada banaanka guul garaan tan iyo bishii January.
Maxamed Saalax oo Amar WAALI ah hordhigay Xiriirka Masar iyo Jawaab KULUL oo la siiyay!!!...(Sheekada oo meel xun mareysa)
Sadio Mane oo qaaday Talaabo ka Farxisay qof kasta oo MUSLIM ah...(DAAWO)